Fampidirana ny bokotra fanampiana fanampiana maika an'ny Tunnel vaovao an'i Joiwo antso an-tariby vy mifangaro vy JWAT415-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
FIAINANA: 2020-08-04 HITS: 13
Ningbo Joiwo dia namolavola bokotra fanampiana vonjimaika tonelina fanampiana tonelina vaovao JWAT415.
Ity telefaona finday tsy misy tariby ity dia mazàna ampiasaina Tunnels, Mining, Marine, Underground, Metro Stations, Railway Platform, Highway Side, Hotely, Toeram-piantsonana, zavamaniry vy, zavamaniry simika, zavamaniry herinaratra ary fampiharana ara-indostrian'ny adidy mavesatra, sns. Ny telefaona dia mety Analog na VOIP, ary asio teboka fanampiana iray manindry bokotra iray mialoha ny vonjy taitra. Rehefa mitranga ny toe-javatra maika dia azonao atao ny manery an'ity bokotra iray ity hiantsoana fiara.
Ity telefaona tsy misy rano JWAT415 ity dia vita amin'ny vy mangatsiaka, miaraka amina IP66-67 miaro azy, tena matanjaka ary sarotra simba. Azonao apetraka amin'ny rindrina ity telefaona ity ary apetaho amin'ny visy mba tsy hisosa. Ireto ambany ireto ny tena mampiavaka ny JWAT415 ho anao.
1. Trano matanjaka, vita amin'ny vy vita amin'ny vy, hery matanjaka avo ary fanoherana mahery vaika
2. Ny fisokafana sy ny sisiny rehetra dia tapaka amin'ny fanapahana laser tsy manamarika, ary ny milina miondrika dia ampiasaina hiondrika.
3. Ny etona tsy tantera-drano sy tsy misy vovoka, miaraka amina mpandahateny tsy miova.
4. Ny boriborintany miorina anaty finday dia manana fahaiza-manao fanoherana mahery vaika ary ny kalitaon'ny feo miantso dia milamina sy mazava.
5. Atosohy ny bokotra antso vonjy taitra iray.
Ianao ve mitady maditra telefaona mpandahateny tsy mandehandeha amin'ny toetr'andro telefaonina ho an'ny tetikasa?